» DHAGAYSO: Qaabke ayay tahay in loo sameeyo maamulada gobollada ee lagu muransan yahay?..
DHAGAYSO: Qaabke ayay tahay in loo sameeyo maamulada gobollada ee lagu muransan yahay?..
December 5, 2012 - Written by maamule - Edited byahmednews ShareWaxaa jira isqab qabsi balaaran oo ka taagan arimaha maamul usamaynta qaar kamid ah gobollada dalka gaar ahaan gobolllada Jubbooyinka oo isha lagu wadahayo.
Hadaba qaab noocee ah ayay tahay in sharci ahaan loo dhiso maamullada dalka gaar ahaan kuwa la iskuhaysto? Waxaana arimahaas ka jawaabay Ismacil Hurre Buuba oo kamid ahaa siyaasiyiinta Soomaalia.
Waxaa uu si adag kaga hadlay arimaha sidiidan ee ka taagan Jubbooyinka, Hiiraan, Labada Shabelle ilaa deegaanada Puntland iyo Somaliland.
3 Responses to DHAGAYSO: Qaabke ayay tahay in loo sameeyo maamulada gobollada ee lagu muransan yahay?..
Daadir says:	December 5, 2012 at 12:54	Horta wax is heysta qabiilada daga gobolada sida gobolada jubooyinka lkn hiiran shabeloyinka leyskuma heysta wa leysku fahamsanyahay bay iyo bakool leyskuma heysto iyagane lkn kismayo kale waxa qabsaday kenya iyo onlf u hogaminayo axmed madobe wadanka beelihi dagnane wey qaxeen muqdisho iyo xerada ifo ayey dagen
Reply	Axmad says:	December 5, 2012 at 13:52	kkkkkkkkkkk buuba nacas nacas dhalay.
Reply	Bezani barmuda says:	December 5, 2012 at 17:54	Maxa la maamulaa ragii 3 xiniiyoodka aya juboyinka dhowr dagano ka hayso xita kismayo ayey qal qal gelinayan mida kale hiran dhowr dagmo ayey ka haystan e dhuntoda waxay u dulesha mamul iyo lcagta rer galbedka iyo unka iyo america war waxa ku hortagao 3 xininle adinka 2 kali ayd ledahin kkk kas kana ka sokoyo wale somali waa la isku goynaya dhaf malibanayalka halagu libaane